नयाँ एप्पल संगीतमा होमपड र एयरपडक्स अधिकतमको भूमिका आईफोन समाचार
होमपड र एयरपड्स नयाँ उच्च-गुणवत्ता एप्पल संगीतमा अधिकतम भूमिका
लुइस प्याडिला | | आईफोन सहायक उपकरणहरू, गृहपृष्ठ
एप्पलले २ hours घण्टा भन्दा कम नयाँ उच्च गुणवत्ता एप्पल संगीतको घोषणा गर्‍यो, डल्बी एटमस ध्वनीको साथ र गुणस्तर नोक्सान बिना नै उच्च रिजोलुसन विकल्पको साथ। यस नयाँ सेवामा तपाईंको स्पिकर र हेडफोनले के भूमिका खेल्छन्?
एप्पल म्युजिकले हामीलाई जूनमा शुरू गर्दै, घाटा बिना संगीत सुन्ने सम्भावना, "हानि रहित अडियो" भनेको छ, अधिक ब्यान्डविथ आवश्यक छ, अधिक भण्डारण तर यसको बदलामा हामीलाई उच्च गुणवत्ता प्रदान गर्दछ। हामीसँग "उच्च रिजोलुसन" को विकल्प पनि छ, जुन यस्तो ढाँचा हुनेछ कि संगीतलाई सम्मान गरिनेछ किनकि यो कुनै स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको छ, कुनै कम्प्रेसन बिना। यसले अधिक इमर्सिभ डोल्बी एटमस ध्वनिको साथ सुन्ने अनुभवलाई पनि बृद्धि गर्दछ। हामी यो संगीत हाम्रो आईफोन, आईप्याड, एप्पल टिभी र म्याकमा सुन्न सक्छौं, तर यो हाम्रो कानमा कसरी पुग्न सक्दछ? एयरपडहरू र होमपड र होमपड मिनीले के भूमिका खेल्दछ?
1 HomePod र HomePod मिनी
2 एयरपडहरू, एयरपड्स प्रो, र एयरपड्स अधिकतम
3 उसको लागि हार्डवेयर बिना नयाँ सेवा
4 हामी कसरी उच्च रिजोलुसनमा संगीत सुन्न जानेछौं?
HomePod र HomePod मिनी
एप्पल स्पिकरहरुमा कुनै श doubt्का भन्दा पर राम्रो आवाज छ, हो, यसको कोटि प्रत्येक। एप्पलले केहि हप्ता अघि होमपड खन्यो, प्रतिस्थापनको घोषणा नगरी, र होमपड मिनी पैसाको लागि यसको उत्कृष्ट मूल्यको लागि शीर्ष विक्रेता भइरहेको छ। यी यन्त्रहरूका धेरै मालिकहरू एप्पल संगीतमा उच्च-गुणस्तरको संगीतको रिलीजको लागि अधीर थिए, त्यसोभए हाम्रो होमपडहरू उनीहरू भन्दा आज राम्रो लाग्नेछ, तर वास्तविकता यो हो कि हामी आधा हुनेछौं।
दुबै होमपड र होमपड मिनी Dolby Atmos ध्वनी संग उपयुक्त छ। यदि हामीले पहिले नै हाम्रो कोठामा ठूलो आवाजको आनन्द उठायौं, विशेष गरी जब हामी दुईवटा होमपडहरू सँगै राख्छौं र स्टेरियो जोडी सिर्जना गर्छौं, अब डोल्बी एटमसको ध्वनिको साथ ध्वनि अनुभव धेरै राम्रो हुनेछ। तर संगीतको गुणस्तर गुमाउनु पर्नेमा अर्को कुरा हो, किनकि होमपड र होमपड मिनीले यसलाई खेल्न सक्षम हुने छैन।
एप्पलले आफ्नो स्पिकरको पुष्टि गर्‍यो एप्पल संगीत Lossless संग उपयुक्त छैन, भन्नुको अर्थ यो हो कि हामीले संगीत पहिले नै जस्तो कम्प्रेस गरिएको ढाँचामा सुन्न जारी गर्नुपर्नेछ। प्रेरणा? हामी अहिले उनीहरुलाई चिन्दैनौं। यो सोच्न गाह्रो देखिन्छ कि "बिग" होमपोड हार्डवेयरले त्यो संगीत पुन: उत्पादन गर्न असमर्थ छ, र यदि यो सफ्टवेयर समस्या हो भने यसलाई अद्यावधिकका साथ समाधान गर्न सकिन्छ। हुनसक्छ होमपड प्रोसेसर पनि हाईफाइ संगीतको लागि मिति हो? ठीक छ, तर कम्तिमा म यो सीडी गुणमा खेल्न सक्छु, केही कुरा हो। तथ्य यो हो कि एप्पलको जवाफ स्पष्ट र संक्षिप्त छ: तिनीहरू उपयुक्त छैनन्।
एयरपडहरू, एयरपड्स प्रो, र एयरपड्स अधिकतम
एप्पल हेडफोनको साथ यो होमपडहरूसँग समान छ। सबै एयरपडहरू र केहि बीट्स हेडफोनहरूले डोल्बी एटमसलाई समर्थन गर्दछ र स्थानिक ध्वनि, मात्र आवश्यकता तिनीहरूसँग H1 वा W1 प्रोसेसर छ, पहिले नै हेडफोनको पछिल्लो पुस्तामा सम्मिलित। तर जब हामी दोषविहीन आवाजको बारेमा कुरा गर्छौं, तिनीहरू पनि खेलबाट बाहिरिन्छन्।
यो हामीले एयरोपडहरू र एयरपड्स प्रोबाट आशा गरेका थियौं जुन ब्लुटुथले नोक्सान विना आवाज सार्न सक्दैन, तर एयरपड्स म्याक्समा केबलको साथ प्रयोग हुने विकल्प छ, र त्यहाँ धेरैको आशा थियो। एप्पलले हामीलाई फेरि एक चिसो पानी फ्याँक्छ कि यो पक्का गर्दै कि यो तकनीकी रूपमा सम्भव छैन, हेडफोनको लाइटनिंग कनेक्टरको सीमाहरूका कारण।
उसको लागि हार्डवेयर बिना नयाँ सेवा
त्यहाँ जिज्ञासु स्थिति छ कि एप्पलले यस्तो सेवा सुरू गर्यो कि "सँधै सँधै सँधै परिवर्तन गराउँदछ" एप्पल प्रयोगकर्ताहरू पूर्ण आनन्द लिन सक्नेछन। हामी डॉल्बी एटमस ध्वनिको मज्जा लिन सक्षम हुनेछौं, तर हामीसँग नयाँ एलाक कोडेकको साथ कुनै पनि एप्पल स्पिकर वा हेडफोनमा हानिविना ध्वनिको मजा लिने कुनै तरिका छैन। कम्तीमा भन्नुपर्दा यो एकदम विचलित हुन्छ।
त्यसो भएमा हाम्रो होमपडहरू वा हाम्रो एयरपडहरू अझ खराब हुँदैन। यदि तपाईं उनीहरूसँग खुसी हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईं अझै खुसी वा अझ बढि अगाडि बढ्नुहुनेछ, डोल्बी एटमसलाई धन्यबाद जुन तपाईंसँग पहिले थिएन र अब तपाईं हुनुहुन्छ, र पनि समान मूल्यको लागि। यो हास्यास्पद छ कि हिजो तपाईंले सोचेको थियो कि तपाईंको एयरपड्स अधिकतम सबैभन्दा खराब हो, र आज तपाईं अचानक उठ्नुभयो कि ती फोहोर नै हुन् भनेर।। तर यो अझै अचम्मको स्थिति हो कि € €०० भन्दा बढीको हेडफोनले सर्वश्रेष्ठ एप्पल संगीत संगीत, वा कम्तिमा दोस्रो उत्तम संगीत बजाउन सक्षम छैन।
हामी कसरी उच्च रिजोलुसनमा संगीत सुन्न जानेछौं?
एप्पलले आफ्नो नयाँ सेवा घोषणा गर्‍यो, यसले हामीलाई भनेको छ कि कुन उपकरणहरू उपयुक्त छन् र कुन होइन ... तर के यसले हामीलाई भनेको छैन कि हामी कसरी गुणस्तरको क्षति बिना संगीत सुन्न सक्छौं। हामीसँग २० मिलियन गीतहरू हुनेछन्, वर्षको अन्तसम्म 20 75 मिलियन ... तर हामी कसरी उनीहरू सुन्नेछौं?। आईप्याड र आईफोनमा एक ज्याक कनेक्टर बिना, र एयरपडहरू र होमपडको साथ, खेलबाट बाहिर, भावना यो हो कि तिनीहरूले हामीलाई एक क्यान्डी सिकाए जुन हामी खान सक्दैनौं। हामीले एपललाई हामीलाई अधिक जानकारी प्रस्ताव गर्न कुर्नुपर्नेछ, आखिर यो अहिले सम्म सुरू गरिएको छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » गृहपृष्ठ » होमपड र एयरपड्स नयाँ उच्च-गुणवत्ता एप्पल संगीतमा अधिकतम भूमिका
यो आईप्याड प्रो २०११ को नयाँ सेतो किबोर्ड हो
नयाँ एप्पल म्युजिक डल्बी एटमसको बारेमा तपाईलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा